रोबक्सिन बनाम सोमा: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | अगस्ट 2021
कम्पनी, चेकआउट समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण कम्पनी चेकआउट कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार, कल्याण समुदाय, कम्पनी कम्पनी, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> रोबक्सिन बनाम सोमा: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
रोबक्सिन बनाम सोमा: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
के तपाईंले कहिल्यै आफ्नो पिठि बाहिर फाल्नुभएको छ वा डरलाग्दो पीठ दुख्ने वा ऐंठन भएको छ? वा के तपाईंले कहिल्यै गलत तरिकाले मोड गर्नुभयो, जसको परिणाम स्वरूप घाँटी दुखाइ भयो? यदि तपाईंले यी कुनै पनि समस्याहरू अनुभव गर्नुभएको छ भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले मांसपेशी आराम गर्ने सल्लाह दिन सक्छ। रोब्याक्सिन र सोमा दुई ब्रान्ड-नाम प्रिस्क्रिप्सन ड्रगहरू हुन् जुन मांसपेशिको ऐंठनको उपचारको लागि संकेत गरिन्छ। दुबै औषधिहरू संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छ।
रोबक्सिन र सोमा भनिने औषधिहरूको समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ कंकाल मांसपेशी शिथिलता । रोबक्सिन र सोमा सामान्य सीएनएस (केन्द्रीय स्नायु प्रणाली) उदासीनता र शामक गुणहरू मा आधारित काम गर्न सोचेको छ। साथै, सोमालाई मेप्रोबामेटमा मेटाबोलिज्ड गरिएको छ, जुन चिन्ता कम गर्ने र बेहोश पार्ने विश्वासमा विश्वास गरिन्छ। यद्यपि यो अज्ञात छैन कि कुन हदसम्म meprobamate ले मांसपेशियोंको ऐंठनलाई राहत दिन्छ।
किनभने सोमाले दुरुपयोग वा निर्भरता पैदा गर्न सक्दछ, योaको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ तालिका IV नियन्त्रित पदार्थ । जे होस् रोबक्सिन र सोमा दुबै मांसपेशि आराम गर्ने क्षमता हुन्, तिनीहरू समान छैनन्। रोबक्सिन र सोमाको बारेमा बढि जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
रोबक्सिन र सोमा बिचको मुख्य भिन्नता के हो?
रोबक्सिन (मेथोकार्बमोल) र सोमा (क्यारिसोप्रोडोल) कंकालको मांसपेशी विश्रामकर्ताहरू हुन्। रोबक्सिन ट्याब्लेट र ईन्जेक्शन फारममा उपलब्ध छ। सोमा ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ। दुबै औषधीहरू वयस्कहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सोमा केवल छोटो अवधिको लागि अधिकतम दुई वा तीन हप्ताको लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
जन्म बीमा बिना गोली नियन्त्रण को लागत
रोबक्सिन र सोमा बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग स्केलेटल मांसपेशी आराम स्केलेटल मांसपेशी आराम
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति सामान्य; रोबक्सिन 5050० ब्रान्डमा उपलब्ध हुन सक्छ ब्रान्ड र जेनेरिक
जेनेरिक नाम के हो? मेथोकार्बमोल Carisoprodol
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेटहरू, इंजेक्शन ट्याब्लेटहरू
मानक खुराक के हो? प्रारम्भिक खुराक: 500०० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू times पटक लिन्छन् वा २ 5050० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू4पटक लिन्छन्
मर्मत खुराक: २०० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू times पटक लिन्छन् वा २ 5050० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू3पटक लिन्छन् २ mg० मिलीग्राम वा mg 350० मिलीग्राम times पटक दैनिक र सुत्ने बेलामा २ देखि weeks हप्ता सम्म
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो समय छोटो समय
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू वयस्क १ 16 वर्ष देखि years 65 वर्ष
शर्तहरू रोबक्सिन र सोमा द्वारा उपचार गरिएको
रोबक्सिन (रोबक्सिन भनेको के हो?) र सोमा (सोमा के हो?) लाई तीव्र, दर्दनाक मस्कुलोस्केलेटल अवस्थासँग सम्बन्धित असुविधा हटाउनका लागि संकेत गरिएको छ।
यो रोब्याक्सिनले जानकारी लेखीएको छ कि रोबक्सिन आराम, शारीरिक उपचार, र अन्य उपायहरूको साथ प्रयोग गर्नु पर्छ।
सोमाले लेखेको जानकारीमा भनिएको छ कि औषधी अधिकतम दुई वा तीन हप्ता मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
सर्त रोबक्सिन सोमा
तीव्र, दर्दनाक मस्कुलोस्केलेटल अवस्थाहरूबाट असुविधा हटाउनुहोस् हो हो
के रोबक्सिन वा सोमा अधिक प्रभावकारी छ?
प्रभावकारिताका लागि मांसपेशि आराम गर्नेहरू तुलना गर्ने हालसालैको डाटा छैन। A २०० review समीक्षा अध्ययनले भने कि त्यहाँ अरूमा सोमा (क्यारिसोप्रोडोल) तीव्र पीठ वा घाँटी दुखाइको लागि प्लेसबोको तुलनामा प्रभावी छ र र्याब्याक्सिन (मेथोकार्बमोल) को प्रभावकारितामा धेरै सीमित वा असंगत डाटाको तुलनामा प्रभावकारी छ भन्ने निष्पक्ष प्रमाणहरू छन्। अन्वेषकहरूले निष्कर्ष निकाले कि यी कुनै पनि औषधीको सापेक्ष प्रभावकारिता वा सुरक्षा निर्धारण गर्न अपर्याप्त प्रमाणहरू छन्।
वास्तवमा, कम पीठ दुख्ने जस्तो अवस्थालाई विचार गर्दा, अमेरिकन पेन सोसाइटी र अमेरिकन कलेज अफ फिजिशियनहरू प्रकाशित दिशानिर्देशहरू प्रायः बिरामीहरूको उपचारको लागि टाईलेनल (एसिटामिनोफेन) वा एनएसएआईडीहरू (ननस्टेरोइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एडभिल जस्तै) लाई पहिलो-लाइन उपचारको रूपमा सिफारिस गर्दछ। यी औषधी राम्रोसँग सहनशील छन् र कम साइड इफेक्टहरू छन्। साथै, अन्य उपायहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तपाईंको डाक्टरले सिफारिस गरे जस्तै योग, शारीरिक उपचार, मसाज, र / वा विश्राम।
कंकालको मांसपेशी शिथिलता सम्बन्धी २०१ stated समीक्षामा भनिएको छ कि यदि पहिलो लाइन एजेन्ट प्रभावकारी छैन भने ए मांसपेशी शिथिल सुरु हुन सक्छ । मांसपेशी शिथिल मांसपेशी spasms को उपचार मा प्रभावी हुन सक्छ तर कष्टदायी साइड इफेक्ट हुन सक्छ। साथै, एक नियन्त्रित पदार्थको रूपमा, सोमा दुरुपयोग र निर्भरतासँग सम्बन्धित छ। दुरुपयोग र निर्भरताका लागि यस सम्भावनाको कारणले, पदार्थ प्रयोग विकार वा पदार्थ प्रयोग विकारको इतिहासमा बिरामीहरूले रोबक्सिनसँग राम्रो गर्न सक्छन्, जुन दुर्व्यवहार हुने सम्भावना कम हुन्छ।
जे होस् मांसपेशी शिथिलहरू छोटो अवधिको राहतको लागि प्रभावकारी (प्लेसबोको तुलनामा) प्रभावकारी हुन सक्दछ, यसमा साइड इफेक्टको of०% जोखिम छ। यी साइड इफेक्टले टाउको दुख्ने, धमिलो दृष्टि, र सम्भावित निर्भरता समावेश गर्दछ। अध्ययनका लेखकहरूले यो पनि नोट गरे कि त्यहाँ मांसपेशी शिथिलताहरू तुलना गर्ने कुनै अध्ययनहरू छैनन् जसलाई टाईलानोल वा एनएसएआईडीजस्ता पहिलो-लाइन उपचारहरूसँग तुलना गरिएको छ। तसर्थ, यदि एक मांसपेशी आराम आवश्यक छ भने, लक्षणहरू, अघिल्ला औषधिहरू प्रयोग, सम्भावित साइड इफेक्ट, र अन्य चिकित्सा अवस्था सहित व्यक्तिगत कारकहरू विचार गर्नुपर्छ। र दुबै औषधिहरू पनि यसमा छन् बियर सूची of 65 बर्ष भन्दा बढी उमेरका लागि अनुपयुक्त हुन सक्ने औषधीको। उनीहरूको बुढेसकालका वयस्कहरूले उनीहरूको नराम्रो असर सहनुपर्दछ किन कि उनीहरूको साइड इफेक्ट, बेहोश हुनु र झर्ने र भंग हुने सम्भावित जोखिमको कारण।
सब भन्दा प्रभावकारी औषधि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा निर्धारित गर्न सकिन्छ, जसले तपाईको लक्षणहरु, चिकित्सा सर्तहरु, र चिकित्सा ईतिहासको साथ साथै तपाईले लिने कुनै पनि औषधी जुन रोबक्सिन वा सोमासँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ विचार गर्न सक्छ।
कभरेज र रोबक्सिन बनाम सोमाको लागत तुलना
रोब्याक्सिन र सोमा प्राय जसो बीमा र मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन योजनाहरू जेनेरिक फार्ममा आउँछन्।
मानक जेनेरिक रोबक्सिन प्रिस्क्रिप्सन (,०, 5050० मिग्रि ट्याब्लेट) को आउट-अफ-पकेट मूल्य about २। हो। नि: शुल्क सिंगलकेयर कार्ड प्रयोग गर्नाले मूल्य $ १ than भन्दा कममा कम गर्न सक्छ।
जेनेरिक सोमा प्रिस्क्रिप्शन (,०, mg 350० मिलीग्राम ट्याब्लेट) को आउट-अफ-पकेट मूल्य लगभग $ is। हो। एकलकेयर कूपनको साथ, तपाईं जेनेरिक सोमा खरीद गर्न सक्नुहुन्छ as १ as भन्दा कममा।
रोबक्सिन वा सोमामा अप-टु-डेट कभरेज जानकारीको लागि तपाईंको बीमा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मात्रा ,०, 5050० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू ,०,। 350० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०- $। $ 0- $ 7
एकलकेयर लागत $ १ + + + १ + +
रोबक्सिन बनाम सोमाको साझा साइड इफेक्टहरू
दुबै रोबक्सिन र सोमाको साइड इफेक्टहरूमा निद्रा, चक्कर, र टाउको दुखाइ समावेश छ। रोबक्सिनले जानकारी लिने सूचनाले घटनाको प्रतिशत रिपोर्ट गर्दैन।
रोबक्सिनका अन्य साइड इफेक्टहरूमा मतली, बान्ता, धमिलो दर्शन, एलर्जी प्रतिक्रिया, भ्रम, दौरा, र समाहित समावेश हुन सक्छ।
सोमाको अन्य साइड इफेक्टमा फ्लशिंग, कम्पन, आन्दोलन, चिडचिड, मतली, बान्ता र दौर्नेहरू शामिल हुन सक्छन्।
यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। अन्य, गम्भीर दुष्प्रभाव हुन सक्छ। प्रतिकूल प्रभावहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
तन्द्रा हो % रिपोर्ट गरिएको छैन हो १-17-१-17%
चक्कर हो % रिपोर्ट गरिएको छैन हो --8%
टाउको दुखाई हो % रिपोर्ट गरिएको छैन हो -5-%%
मुहान: डेलीमेड (रोब्याक्सिन) , डेलीमेड (सोमा)
रोबक्सिन बनाम सोमाको ड्रग अन्तर्क्रिया
रोबक्सिन वा सोमा रक्सीको साथ जोड्नुहुँदैन। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली डिप्रेसन निम्त्याउने औषधिहरू, जस्तै पर्कोसेट जस्ता ओपियोइड्स, भेलियम जस्ता बेन्जोडियाजेपाइनहरू, र एन्टिडीप्रेससन्टहरू, रोबक्सिन वा सोमा लिदा सम्भव भएमा बेवास्ता गर्नुपर्छ। थप असरहरू दुबै CNS डिप्रेशन (गहिरो बेहोराउने र कमजोर बनाउने) र श्वासप्रश्वासको उदासीनता (शान्त र / वा सास फेर्न कठिनाईको कारण, र प्राणघातक हुन सक्छ) सँगै देखा पर्न सक्छ। जे होस्, यदि अन्तर्क्रियात्मक औषधीहरूको संयोजनलाई रोक्न सकिएन भने, छोटो अवधिको लागि प्रत्येक औषधिको न्यूनतम खुराक प्रयोग गर्नुपर्दछ, र बिरामीलाई नजिकबाट निरीक्षण गर्नुपर्दछ।
अन्य औषधि अन्तर्क्रिया हुन सक्छ। औषधि अन्तर्क्रियाको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्। प्रिस्क्रिप्शन, ओभर-द-काउन्टर, र भिटामिन सहित सबै औषधीहरूको बारेमा तपाइँको डाक्टरलाई भन्नुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग रोबक्सिन सोमा
फेनोबार्बिटल बार्बिटुरेट्स हो हो
टेमाजेपम बेन्जोडियाजेपाइन हो हो
Zolpidem शामक सम्मोहन हो हो
डिफेनहाइड्रामिन एन्टीहिस्टामाइन्स हो हो
रोबक्सिन र सोमा को चेतावनी
रोबक्सिन वा सोमा प्रयोग गर्नु अघि, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि स्वास्थ्य अवस्था (जस्तै कलेजो वा मिर्गौलाको समस्या) को बारेमा र तपाईं लिनुहुने सबै औषधीहरूको बारेमा बताउनुहोस्।
रबाक्सिन वा सोमालाई रक्सी वा औषधीहरूको साथ जोड्नुहोस् जुन CNS डिप्रेशन पैदा गर्दछ (माथिको ड्रग अन्तर्क्रिया सेक्सनमा अतिरिक्त जानकारी हेर्नुहोस्)।
रोबक्सिन वा सोमाले निन्द्रा वा चक्कर आउँछ, जसले तपाईंको गाडी चलाउन वा मद्दत पुर्‍याउँछ। ड्राइभ वा मेसिनरी संचालन नगर्नुहोस् जबसम्म तपाई निश्चित हुनुहुन्न कि रोबक्सिन वा सोमाले तपाईंको सतर्कता र प्रतिक्रिया समयलाई असर गर्दैन।
यदि तपाईलाई कुनै पनि कम्पोनेन्टबाट एलर्जी छ भने रोबक्सिन वा सोमा प्रयोग नगर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई मेप्रोबामेटबाट एलर्जी छ भने सोमा प्रयोग नगर्नुहोस्।
बच्चाहरू र अरूको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्।
अतिरिक्त सोमा चेतावनी:
सोमा प्रयोग नगर्नुहोस् यदि तपाईंसँग तीव्र रुकावट पोर्फेरियाको ईतिहास छ।
सोमा १ 16 देखि 65 65 वर्ष उमेरका वयस्कहरूमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ।
नियन्त्रित पदार्थको रूपमा, सोमा दुरुपयोग, निर्भरता, फिर्ती, दुरुपयोग, र आपराधिक डायभर्सनको साथ सम्बन्धित छ। सोमा दुरुपयोगले अधिक मात्रामा निम्त्याउन सक्छ, जसले कम रक्तचाप, दौरा, CNS र श्वासप्रश्वास उदासीनता, र मृत्यु निम्त्याउन सक्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सोमा बताउनु अघि दुरुपयोगको जोखिमको आकलन गर्दछ र उपचारको लम्बाई अधिकतम दुईदेखि तीन हप्ता सम्म सीमित गर्दछ।
केहि केसहरूमा, सोमा लिने बिरामीहरुलाई दौरा पर्थ्यो। धेरै जसो केसहरू बहु औषधि ओभरडोजसँग सम्बन्धित थिए।
अचानक सोमा रोक्नाले उल्टो लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ, अनिद्रा, बान्ता, टाउको दुख्ने, थरथर काँप्ने, घुमाउने, भ्रम, र मनोविकृति सहित। तपाइँको हेल्थकेयर प्रदायकलाई सोमालाई टेपर गर्ने उत्तम तरिकाको बारे सल्लाह लिन सल्लाह दिनुहोस्।
बच्चा र अरूको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्, लक र कुञ्जी मुनि यदि सम्भव भएमा। तपाईको फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस् कि कसरी बाँकी औषधिहरूको डिस्पोजल गर्ने।
सोमाको अधिक मात्राले CNS डिप्रेसन निम्त्याउन सक्छ। सोमा अधिक मात्राले मृत्यु, कोमा, श्वासप्रश्वास उदासीनता, कम रक्तचाप, दौरा, मतिभ्रम, धमिलो दृष्टि, उत्साह, ईन्कोर्डिनेशन, टाउको दुख्ने, र दिव्यसम्बन्धी समस्या निम्त्याएको छ।
सोमाको घातक ओभरडोज रिपोर्ट गरिएको छ। यी ओभरडोजहरू दुर्घटनात्मक र गैर दुर्घटनाग्रस्त भएका छन् र एक्लै वा सीएनएस डिप्रेसनन्टहरूसँग मिलेर बनेको छ, सिफारिस गरिएको खुराकमा पनि।
रोबक्सिन बनाम सोमाको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
रोबक्सिन भनेको के हो?
रोबक्सिन मांसपेशियोंको ऐंठनको उपचार गर्न प्रयोग गरिने स्केलेटल मांसपेशी शिथिल हो। यसले घटक मेथोकार्बमोल समावेश गर्दछ।
सोमा भनेको के हो?
सोमा मांसपेशियोंको ऐंठनको उपचारको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। यो एक मांसपेशी आराम छ र carisoprodol समावेश गर्दछ।
के रोबक्सिन र सोमा एकै हुन्?
होईन, दुबै औषधी मांसपेशी शिथिलका रूपमा चिनिन्छ, तर उनीहरूसँग धेरै भिन्नताहरू छन्, जसरी माथि वर्णन गरिए। उदाहरण को लागी, तिनीहरूसँग बिभिन्न सामग्रीहरू, खुराकहरू, र नियन्त्रित पदार्थ वर्गीकरणहरू छन्।
के रोबक्सिन वा सोमा राम्रो छ?
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारण गर्न सक्दछ कि रोबक्सिन वा सोमा तपाईंको लागि अधिक उपयुक्त छ, तपाईंको लक्षणहरू र चिकित्सा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, तपाईंले लिनुहुने अन्य औषधीहरूसँग जुन सम्भवतः रोबक्सिन वा सोमासँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। तपाइँको डाक्टरले दुरुपयोग वा निर्भरताका लागि तपाइँको जोखिमको मूल्या assess्कन पनि गर्दछ यदि सोमालाई विचार गरिरहेछ।
म सिंगुलिरको सट्टामा के लिन सक्छु
के म गर्भवती हुँदा रोबक्सिन वा सोमा प्रयोग गर्न सक्छु?
रोबक्सिन हुन सक्छ भ्रूण असामान्यताहरू र गर्भावस्थाको समयमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। सोमासँग छैन पर्याप्त डाटा गर्भावस्थामा प्रयोगमा र सामान्यतया गर्भावस्थामा प्रयोग हुँदैन। गर्भावस्था वा स्तनपानको मार्गनिर्देशनको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म रक्सीले रोबक्सिन वा सोमा प्रयोग गर्न सक्छु?
होइन। यदि तपाईं रोबक्सिन वा सोमा लिइरहनुभएको छ भने मदिराबाट बच्नुहोस्। रक्सीले रोबक्सिन वा सोमाको साथ थप असरहरू निम्त्याउन सक्छ र सीएनएस डिप्रेशन र अशक्तता, र श्वासप्रश्वासलाई ढिलो वा गाह्रो सास फेर्दा समस्या निम्त्याउन सक्छ, र यसले घातक ओभरडोज पनि निम्त्याउन सक्छ।
कुन मांसपेशी आराम गर्ने सोमा जस्तै छ?
Carisoprodol Soma को जेनेरिक बराबर हो — सोमा र carisoprodol उस्तै हो। रोबक्सिन र सोमा बाहेक अन्य मांसपेशि रिलरहरूमा तपाईंले समावेशको बारेमा सुन्नुभएको हुन सक्छ फ्लेक्सेरिल (cyclobenzaprine), स्केलेक्सिन (metaxalone), र Zanaflex (tizanidine)।
के रोबक्सिन एक ओभर-द-काउन्टर औषधि हो?
होईन। रोबक्सिन केवल पर्चेको द्वारा उपलब्ध छ। मांसपेशी आराम गर्नेहरू ओभर-द-काउन्टर (OTC) उपलब्ध छैनन्। केहि एनाल्जेसिकहरू (पीडा निवारकहरू) जस्तै टाईलेनल (एसिटामिनोफेन) वा एडभिल (आईबुप्रोफेन) ओटीसी उपलब्ध छन्। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस् कि यदि तपाईले मांसपेशी आराम गर्ने प्रयास गर्नु भन्दा पहिले ओटीसी औषधि प्रयोग गर्नु पर्छ।
के रोबक्सिन एक दर्द हत्यारा हो?
रोबक्सिनलाई मांसपेशी आराम गर्ने वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ। मांसपेशिको ऐंठनको कारणले यसले दुखाइमा मद्दत गर्न सक्छ। यो एक दर्द हत्याराको रूपमा वर्गीकृत गरीएको छैन, तर यसले दुखाइ र ऐंठनलाई राहत दिन्छ।
इटोडोलैक बनाम आईबुप्रोफेन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो
केफेक्लेक्सिन के संक्रमणको लागि प्रयोग हुन्छ?
काउन्टर औषधीहरुमा Penile खमीर संक्रमण
छातीको भीड र खोकीको लागि उत्तम औषधि के हो?
घर मा महिला उपचार मा खमीर संक्रमण
पछिल्लो योजना कहिले लिने बी